Uyitsale njani indoda yoMhlaza - Ihambelana Astrological Signs
Uyitsale njani indoda yoMhlaza
Ukuba ufuna ukutsala umdlavuza indoda yomhlaza, akukho zibane zikhanyayo kunye nobusuku besixekounonkala; Kwaye akangeni nakwizitshixo. Ke, ukuba yile nto unayo engqondweni, awungekhe ufune ukuchitha iinzame zakho kumntu onomhlaza. Ukuba, kwelinye icala, ujongeukuthandana ngekamva, lo ngumfana ofanele ukutsala umdla.
Yiba nesiqinisekiso kodwa ungatyhaleli
Indoda yomhlazaumfazi ogqibeleleyoYindibaniselwano yobuhle obusulungekileyo, ubabalo kunye nobukrelekrele. Utsaliwe ngabafazi abakumgangatho ofanelekileyo, abanembeko, abahle kwaye banenkathalo, kodwa bayazibophelela ngendlela yobufazi.
Umhlaza womntu kunye noLeo Woman Love ukuhambelana
Umhlaza womntu kunye noMfazi waseCapricorn ethandweni
Umfazi waseTaurus kunye noMhlaza womntu uthanda iHoroscope
Musa ukulinda ukuba Akusukele
Nangona kunjalo, ukuba ucinga ukuba uya kukusukela, uya kudana. Amadoda anomhlaza aneentloni kwaye ayithiyile ingcinga yokuba angaliwa, ke nxiba eyona aura yakho ibalaseleyo, kwaye uvule umtsalane. Unga:
Zimisele ukwenza amanyathelo okuqala ukusuka kubuhlobo uye kwenye into engaphezulu.
Ulibale malunga neengcebiso ezifihlakeleyo; ngqo kwaye umxelele into oyifunayo, kodwa musa ukunyanzela.
Kuyatshiwo ukuba indlela eya entliziyweni yomhlaza isisu kunye nosapho. Mmeme ukuba adle nawe esidlweni sakho; ukuba uyakwazi ukupheka, konke kungcono.
Umhlaza wamadoda ulusu kancinci xa kufikwa kwezothando, ke sukungxama. Ukuba umntu onomhlaza uyavuma ukuchitha ixesha kunye nawe, themba ukuba unomdla kwaye ufuna ukukwazi.
Yiba mnandi kusapho kunye nabahlobo bakhe
Intsapho yakhe ibalulekile kuye, kwaye uhlala ejonga abahlobo bakhe njengenxalenye yosapho, ke qiniseka ukuba awuyihoyi okanye uyathuka. Ukwazi usapho kunye nabahlobo kunye nokuba nabo njengawe kunokuba yenye yeendlela ezilungileyo zokwamkelwa ebomini bakhe.
Thetha Ngentsapho Yakho
Kuba ukuthandana yinto yosapho yendoda enomhlaza, mxelele malunga nosapho lwakho. Thetha naye malunga nobuntwana bakho kwaye ukhumbule iinkumbulo ezintle zosapho. Mazise nokuba unamaphupha ekhaya kunye nosapho olwakho.
Thetha ngomsebenzi wakho
Umntu onomhlaza ufuna ukuziva ekhuselekile. Unomdla kumfazi onokuzikhathalela ngokwezemali kwaye unayoizicwangciso zomsebenzingekamva lakhe.
Musa ukuCinga kuBomi baKhe
Umhlaza uyafihlwa kwaye uya kubetha phezulu xa beqonda ukuba uyaprinta, ke musa ukubuza imibuzo emininzi, kwaye ungamxeleli nantoni na eyathethwa ngomnye umntu kuwe ngokuzithemba. Mazi ngokuhamba kwencoko. Ngalo lonke ixesha bonisa umdla wokwenene kwinto ayithethayo, kwaye xa sele umthembile, uya kukuthetha.
UKUYAUmhlaza womntuuyakuthanda ukuchukunyiswa. Ukuwola ngobubele okanye ukubamba isidlele xa udibana kwaye ubambe ngobunono egxalabeni lakhe okanye esonweni xa uthetha kuya kukuthandisa kwindoda enguMhlaza.
Yiba novelwano kunye naye
Ufuna ingqalelo enkulu kunye nokuqonda. Ke, ukuba uyakuvula, beka ecaleni umbono wakho kwaye umamele. Sukusebenzisa ii-clichés, sukugweba, kwaye ungaziva unyanzelekile ukuba uyenze ngcono. Yiba novelwano kwaye unxibelelane naye kwinqanaba leemvakalelo.
Bonisa ukuba sesichengeni okuncinci
Umhlaza uthanda ukuthatha indima yendoda eyindoda, ke mcele akuncede ngandlela ithile encinci okanye akunike iingcebiso okanye isikhokelo. Ngokwenza oku awumbonisi imbeko kuphela, kodwa ukwabonisa ukuba umthembile ngokwaneleyo ukuba uzenze ube sesichengeni.
Kulungele ukuhlawula indlela yakho
Imali ilingana nokhuselekoKumfana onolu phawu, kwaye uhlala eyilumkele kakhulu imali yakhe. Akaboni nto iphosakeleyo ngomfazi ohlawula indlela yakhe. Nikezela ngokwahlulahlula itsheki okanye ukuhlawulela itikiti lakho. Unokuhla, kodwa uyakufumana unomtsalane ngakumbi kuba uthembisile. Ngokuhambelana nale migca inye, kunokwenzeka ukuba aqale ukubuza ikamva lakho kunye nawe ukuba uyakholelwa ukuba awukhathali ngemali yakho.
Ngaphezulu kweLanga lokuSayina kweenkwenkwezi
Kuhlala kubalulekile ukukhumbula ukuba umntu onomhlaza ungaphezulu komqondiso welanga. Wonke umntu uya kuba yedwa ngendlela yakhe ekhethekileyo.Iimpawu zelangaziyimfuneko kwaye ziyonwabisa, kodwa ukuchaza umntu ngophawu lwelanga kuphela kunokukulahlekisa.
indlela yokubamba isiFrentshi njengengcali
Imibuzo Eprintiweyo Ukuhamba Tips Asperger Syndrome Ukukhula Ukukhetha Ikharityhulam
Umntu Otya Imifuno Ukutya
ungazi njani ukuba iglasi yobisi iyinyani
ngowuphi owona mdlalo ufanelekileyo namhlanje
ndingazinikela phi iinwele zam
yintoni injongo yolwimi
ndingazinikela phi iiglasi ezindala
indlela yokutsala umfazi wepisces
iimpawu zokuqala zokukhulelwa ezinjeni